Taariikhda Ghostwriter Taariikhda Gargaarka Ardayga
Codsi dib u celin!
Hada cusub: Wadahadalka qorayaasha kadib amar bixinta. Himilada: tayada aan fiicnayn! Adeeggu wuxuu khuseeyaa heerka tayada dhexe.
qiimaha Waaxyaha dib u eegista nagu saabsan
qiimaha Dalbo hadda! Waaxyaha dib u eegista nagu saabsan
, 19: 36
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah taariikhda
Barashada taariikhda waxay ubaahantahay hami sare, rabitaan ah barashada iyo edbinta ardaydeeda. Macluumaad badan waa in lagu barto qalbiga. Sidoo kale waa inaad Shaqada guriga ugu dambayntiina mid kale shahaadada bachelor, shahaadada Masterka, shahaadada Masterka, Qoraal oder Maqalka qor? Maadaama la fahmi karo inaad adigu Aidis si aad u rabto Waan caawin karnaa ardayda. Marka laga soo tago maadooyinka sida taariikhda cusub, qadiimiga iyo qarniyadii dhexe, waxaa jira qaybo ka mid ah. Waxaa jira meelo badan oo cilmi baaris ah oo u baahan fiiro gaar ah. Mawduuca luqadaha iyo dhaqaalaha waa inaan sidoo kale la dhayalsan. Dhammaan mawduucyadan mawduucyadu waxay u baahan yihiin xirfadahaaga fikirka gorfaynta oo badiyaa waa qaybo adag oo aad u adag in la maro. Dhallinyaro aad iyo aad u tiro badan ayaa ku sii riixaya cilmiga taariikhda. Aqoonta aqooneed ee tan looga baahan yahay tan ayaa la helay sannadihii la soo dhaafay. Daraasaadka taariikhda waxaad diirada saareysaa taariikhda dadyowga iyo siyaasada taariikhda dhow iyo tan hore. Haddii aad hesho isweydaarsi ku saabsan dhammaan waayihii bilowga, waxaad fursad u leedahay inaad ku takhasusto mid ka mid ah qaybaha hoose inta lagu jiro barashadaada. Tababarka fikirka ah ka sokow, dalxiisyadu waxay kaabayaan xirfadahaaga iyo aqoontaada. Waxaad la kulmaysaa taariikh aad u dhow. Tani waqti badan ayey kaa qaadataa. Waan ku caawin karnaa. Si fudud noola qaado Kontakt ama codso mid bilaash ah dib u xusuusasho at. Maamuluhu wuxuu bilaabi doonaa shaqadaada isla markiibana wuxuu kuu heli doonaa qoraa ghost ah si shaqadu u bilaabanto.
Codso dalab aan qasab ahayn hadda!
Waxaan kaa caawin karnaa aqoontayada sayniska. At Fragen gacantaada ayaan ku jirnaa. Mawduucaagu waa xooggeenna. Qoritaanka qoraalkaaga ayaa kaa caawin doona. Qorayaasheennu waxay ku damaanad qaadayaan tayada. Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada. Adeegsiga adeegyadeena ayaa kaa caawin doona waxbarashadaada. Qoraalkaaga Shaqada guriga waa inaad noo ogolaataa inaan sameyno. Xitaa adiga leh Warqad aqoon kororsi ah oder Maqalka waan ku taageersanahay. Aqoonyahan cirfiid aqoonyahan ah ayaa shaqada kuu qaban doona. Si loo soo gudbiyo shaqada sayniska, shaqo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa. Tani waxay ku siin doontaa darajo wanaagsan. Hubinta khayaanada ayaa dabcan sidoo kale daboolay adeeggayaga! Ugu dambeyntiina, markaad noo shaqaaleyso qoraa ahaan, waxaad ka faa'iideysanaysaa wax kasta oo ka wanaagsan kuwa caddaaladda ah Qiimaha iyo tayada wanaagsan! Si aad ugu guuleysato koorsada, dhammaan qaybaha waa in dabcan la gudbiyaa. Tani aad ayey ugu adagtahay qaybo ka mid ah maadama maadooyinkan la baaray. Ku gudubka maadada noocaas ah ayaa ah tan ugu fiican ee kugu dhici karta. Waxaan ku siin karnaa adiga Shaqada guriga, shahaadada bachelor, shahaadada Masterka, shahaadada Masterka oder Qoraal geeyo
Si aad u hesho darajo wanaagsan, waa inaad caawimaad raadsataa. Sababtoo ah hawlo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan oo wanaagsan. Waa inaad si joogto ah uga shaqeysaa iyada oo aan lagaa dhex gelin, haddii kale waxaad si dhakhso leh uga bixi doontaa mawduuca. Ka tag cilmigaaga Shaqada guriga qor. Qoraa-yahankeenna aqoonta leh ayaa shaqada kuu qaban doona. Adeegsiga adeeggan oo kale wuxuu ku siinayaa xorriyad badan oo aad ugu diyaar garowdo maadooyinka adag. Sidoo kale waa inaad ku tiirsanaataa mid ka mid ah qorayaashayada tayada qoraalkaaga ee ku saabsan daraasaddaada tacliimeed.
unsere Qorayaashu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah oo ku saabsan aaggooda cilmi-baarista oo aad haysato shahaado maadadaada ah. Kama baran kartid aqoontaan dhowr toddobaad inta lagu guda jiro waxbarashadaada. Der Bachelor iyo Maqalka waxaa lagu gaari karaa oo kaliya dadaal badan. Waan ku faraxsanahay inaan taas sameyno Akhrinta Tan awgeed. Markaad qalin jabiso waxaa jira ikhtiyaarro badan oo aad adigu awoodid sayniska sayniska sii wad inaad xirfad yeelato awooddo.
Qoraalka ghost taariikhda
Markaad hesho shahaadadaada taariikhda, waxaad haysataa fursado badan. Taariikhyahanadu way sii wadi karaan wadadooda tacliimeed waxayna heli karaan shahaadada dhaqtarka iyagoo kaashanaya buugaagta. Tani waxay gogol xaar u tahay baaritaan dheeri ah waxayna kuu suurta gelinaysaa inaad wax ku barato oo aad wax ku dhigto jaamacadaha. Qaar badan oo ka mid ah mashaariicda cilmi baarista ee xiisaha badan ayaa ku sugaya adiga iyo dhinacyada cusub ee taariikhda ayaa had iyo jeer sugaya inaad adigu ogaato. Garab istaag marka ay timaado sameynta xaqiiqooyinka taariikheed ee looga faa’iideysan karo arrimaha socda. Waxaad u adeegsan kartaa aqoontaada si aad ugu horumariso fahamka jinsiyadaha kale. Macallin ahaan aqoontaada ugu gudbi jiilasha soo koraya. Ama, shaqaale ahaan jagada maamul ee matxafka, ka dhig taariikhda mid la taaban karo dhammaan dhinacyada xiisaynaya. Ka ogow wejiyada gebi ahaanba aan la aqoon dhaqammada qadiimiga ah ee ku jira goobaha qodista. Waxaa jira xaddidan fursado. Qorayaasheennu waa aqoonyahanno cilmi baaris iyo qoris ku sameynayay waraaqaha mawduucaaga gaarka ah dhowr sano. Waxaan kugu taageeri karnaa shaqada cilmiga. Qorayaasheennu waxay si dhakhso leh u aqoonsadaan cilaaqaadka sidaas darteedna waxay keenaan tayo wanaagsan. Sidaa darteed, si dhib yar ayuu ugu baahan doonaa wakhti tababar wuxuuna isla markiiba kubilaabi karaa mowduuca iyo hawshaada dhabta ah. Qoraalka ghost ayaa kaa caawin doona.
Aqoonta tacliinta laguma helo waqti gaaban. Taariikhyahanadu waxay u baahan yihiin waqti si ay u fahmaan waaqica soo maray. Taariikhyahan ahaan, qofku wuxuu aad ugu mashquulsan yahay isbarbardhiga ilaha kala duwan si fikrad looga helo waxa dhacaya. Si awood loogu yeesho in lagu maro wadooyinkan oo dhan si guul leh, tababar aasaas leh oo si fiican loo qiimeeyay ayaa muhiim ah. Dhamaan qoraaladeenna aqoonyahannada aqoonta leh waxay kasbadeen shahaado qayb ka ah mastarka, dibloomada ama shahaadada. Waxay leeyihiin sannado badan oo khibrad shaqo ah oo ku saabsan takhasuskaaga waxayna kugu taageeri karaan dhammaan aqoontaada. Qorayaashayadu ma aha oo kaliya khabiiro ku saabsan arrimaha farsamada. Shaqooyinka tirada badan ee ay awgood qoreen awgood, qorayaasheena waxay yaqaanaan heshiisyada qoraalka cilmiyaysan oo kaliya ma keenaan shaqo aan fiicnayn marka la eego waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Shaqada tacliimeed waa inaad u isticmaashaa wakaaladdayada 'ghostwriter'. Ardaydu haddaba waxay isticmaalaan kuweenna Aidis dib ugu noqo si aad u sii wadato shaqadaada oo diirada saartay hal mowduuc.
Taariikh nololeed xirfad leh
Kadib markii aad dhamaysatay waxbarashadaada Master-ka ama Qoraalka PhD waxaa jira fursado badan. Waad ka shaqeyn kartaa hay'adaha cilmi baarista waxaadna diirada saari kartaa taariikhda casriga ah, tusaale ahaan.
Goobta taariikhda ee shirkadaha ganacsiga
Ka qalinjabinta taariikhda, waxaad haysataa fursado kala duwan. Waxaad ugu gudbin kartaa xirfadahaaga dadka kale adoo baraya taariikhda. Waad sii wadi kartaa cilmi-baaristaada jaamacadda ama, tusaale ahaan, waxaad aadi kartaa goobaha qodidda si loo ogaado dhaqammada shisheeyaha.
Hubinta tayada ee taariikhda taariikhda
HELI HADII AAN HELI LAHAYN
Fadlan weydiimaha ama amarrada cusub ee macaamiishayada jira si toos ah ugu dir maamulahaaga.
Waan aqriyay shuruudaha iyo shuruudaha (https://papernerds.de/AGBs/) iyo cadeynta ilaalinta xogta (https://papernerds.de/datenschutzerklarung/) waana aqbalay.
SU'AALO AAN LAHAYN
Xogtaada ayaa nala socon doonta si qarsoodi ah la daweeyey! Shaqada oo dhan waxaa loo qabtaa si qarsoodi ah. Adoo gujinaya "Codsi bilaa waajib ah", waxaan ku siinayaa ogolaanshahayga ka shaqeynta xogteyda shaqsiyadeed si waafaqsan Ilaalinta xogta.
La wadaag boggan
Isu wadaag google
La qaybso twitter-ka
Kala xiriir bogeeda
La wadaag Pinterest
La wadaag daabacaadda
Ka wada sheekeyso email
Lambarka adeegga ardayga 1 ee Jarmalka
U qor xafiiskayaga macaamiisha:
Qoraalka cirfiidka tacliinta
Muxaadarooyin macallin ah
Macluumaad muhiim ah
dib u eegista
Wax kasta oo lagu sameeyo ghostwriting
© 2000 - 2021, Waraaqaha.de. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan.
Hadda cusub: Marka amarka la dhigo oo amarka la heli karo, wadahadal lala yeesho qoraagaaga iyo mid ka mid ah asxaabteena isla markiiba waa la qabtaa iyada oo ujeedadu tahay inay ku siiso tayo aan fiicnayn. Adeeggan waxaa lagu soo daray qiimaha boggii oo bilaash ah oo laga helo heerka tayada dhexdhexaadka ah.
Codso qiimo dhimis 2% ah!
Waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan ogolaanshaha oo ay ku jiraan cabirka guusha, isticmaalka adeeg bixiyaha maraakiibta MailChimp, Mailerlite, diiwaangelinta diiwaangelinta iyo xuquuqdaada kala noqoshada ee ku xusan bayaankayaga ilaalinta xogta.